अशोकको नाममा डलर खेति : युट्युवमा १३ हजार बढी कन्टेन्ट | Rajmarga
अशोकको नाममा डलर खेति : युट्युवमा १३ हजार बढी कन्टेन्ट
काठमाडौं । के बालक, के युवा अनि के वृद्ध । पछिल्लो केही महिनायता ‘भाइरल’ बनेका अशोक दर्जीको नाम नसुन्ने, उनलाई नबुझने र उनको गीत नसुन्ने सायदै होलान । अहिले युट्युवमा छाईरहने सबैभन्दा अग्र पंक्तिको नाम हो अशोक दर्जी । एक दिन, एक साता, एक महिनादेखि मात्र होईन् । विगत पाँच/छ महिनादेखि अशोक युट्युवमा छाईरहेका छन् ।
अशोक के–के गर्दैछन्, के खान्छन्, के लाउँछन, कुन देश पुगे, कहाँ कस्तो गीत गाए जस्ता उनीसम्बद्ध हरेक घटना युटयुबका कन्टेन्ट बनेका छन् । यत्तिसम्म कि अशोकको नाम जोडेर भ्यूज बढाउन थुप्रै कन्टेन्टहरु बनेका छन्, बनाइएका छन् ।
नेपाली युनिकोडमा उनको नाम ‘अशोक दर्जी’ लेखेर युट्युब सर्च गर्दा मात्रै १३ हजार बढी त्यस्ता कन्टेन्टहरु भेटिन्छन् । युट्युब मनिटाइज गरेर कमाउने भाँडो बनाएकाहरुका लागि अशोकको नाम नै ब्राण्ड भएको छ । पैसा झर्ने मेसिन भएको छ ।
उनीहरु अशोकको नाम जोडेर आफ्नो यूटयुवमा पोष्ट गरेको अशोकसम्बद्ध कन्टेन्टको भ्युज बढाउन तछाडमछाड गरेका छन् । त्योसंगै भ्यू बढाएर पैसा कमाउन लागिपरेका छन् । पछिल्लो केही सातायता अशोकबारे थप बहस शुरु भएको छ । विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । अशोकलाई प्रयोग गरेर अरुले नै फाइदा उठाइरहेको, बालश्रम शोषण भएको, एकाधिकार जमाएको, घर निर्माणमा किचलो भएको ईत्यादी । आजहामी यी आरोपमाथि चर्चा नगरी अशोकमाथि युटयुवर किन यसरी लागिपरेका छन् त्यसको चर्चा गर्नेछौं ।
दर्जीमा अडकिएको डलरः
यतिवेला युटयुवरको खोजीमा अशोक एक नम्बरमा परेका छन् । यतिबेला युटयुब मोनिटाइज गरेर कमाउने भाँडो बनाएका केही युट्युवरहरु अशोकको पछिपछि दौडिरहेका छन् । उनीहरुले बुझेका छन्- अशोकको नाम जोडेमात्रै कन्टेन्टले राम्रो भ्यूज पाउँछ । राम्रो डलर कमाइन्छ । त्यसकारण पनि छोटो समयमै उनीमाथि युट्युवमा हजारौं कन्टेन्टहरु अपलोड भएका हुन् । उनको जुन अन्तर्वाता वा भिडियो हाल्यो त्यही हिट, अशोकको क्रेज दिनदिनै बढ्दो ।
केही न्यून युट्युबरले आफूले कमाएको केही हिस्सा अशोकलाई दिएपनि प्रायः युटयुवरले अशोकलाई प्रयोग मात्रै गरेका छ्रन् । यसरी हेर्दा अशोकको प्रयोग गरी युटयुवमा कमाउने धन्दा मात्र चलिरहेको छ । पैसा आउँछ भन्दै उनीसम्बद्ध जस्तोसुकै भिडियो, मनलाग्दी शीर्षक राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनी एक व्यक्ति सयौं युट्युवरका लागि आयस्रोत बनेका छन् । अशोक दर्जीका नाममा जे-जस्तो पनि भिडियोहरु बनेका छन् । जसले अशोक ट्रोलको शिकार हुनु परेको छ ।
बलेको आगो ताप्दैः
अशोक दर्जी अहिले बलेको आगो हुन् । उनका नामका युट्युवमा अपलोड भएका कन्टेन्टहरु दर्शकका लागि रुचिका विषय बन्छन् । अशोकमा कला थियो तर उनको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । टंक बुढाथोकीले काठमाडौं ल्याएर गीत रकर्ड गराए, भिडियो बनाए । अशोकको परिवारका लागि घर निर्माणको पहल पनि गरे । जसले टंकले स्यावासी पाए संगैसंगै अशोक यत्रतत्र सर्वत्र छाए । उनीप्रति आम-श्रोता तथा दर्शकले माया प्रेम अनि सदभाव दर्शाए । त्यसैबीच युट्युवलाई कमाउने धन्दा बनाएकाहरुले मौका समाए । अनि अशोकको पछिपछि लागे ।
केही दिन अघिमात्रै प्रदीप कंडेल नाम गरेका एक व्यक्तिले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । उनको स्टाटसले युटुवरमाथि व्यङग्य गरेको छ । उनले स्टाटसमा अशोक दर्जीलाई बलेको आगोको संज्ञा दिँदै आफै सल्काएर आगो ताप्न सिक्न आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘यो देशमा अशोक जस्ता हजार प्रतिभा छन खोजी गरे, मिडिया भनेको बलेको आगो मात्र ताप्ने हैन आफै सल्काएर पनि ताप्न सिक ।’
देशमा अनेक पेशा अनि व्यवसायका व्यक्तिहरु छन् । उनीहरुको पनि अनेक प्रतिभा तथा क्षमता पनि छ । कुना कन्दरामा त्यस्ता प्रतिभाहरु हराएका छन् । तिनीहरुलाई उजागर गर्न पनि युट्युवरहरुको ठूलो हात रहन्छ तर यहाँ चलेकै व्यक्तिमाथि अनेक शीर्षकमा कन्टेन्टहरु युटयुवमा अपलोड भएका छन् । ‘अशोक दर्जीले यसो गरे’, ‘अशोक दर्जीले उसो गरे’ भनी अनेक भिडियो बन्नु अशोकको ब्राण्डबाट डलरको खेती गर्नुसिवाय अरु केही होईन् । यसअर्थमा बलेको आगो ताप्नुमात्र युटयुवरको खेती भएको छ ।
अशोक बलेको आगो हुन तर निभेको अगुल्ठो पनि जोडेमा बल्न सक्छ भन्ने हामीले बिर्सन हुन्न ।
केही महिनाअघि वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठकी श्रीमती यशोदा सुवेदी (श्रेष्ठ)को मृत्यु हुँदा उनलाई पशुपतिमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा वरिपरि घेरिएका सञ्चारकर्मी (विशेष गरी युटयुव च्यानल संचालक)हरुको तस्वीरको खुबै आलोचना भयो ।
कतिले मानवीय संवेदना हराईसकेको संज्ञा दिए भने कतिले मृत्युलाई मजाक बनाएको त कतिले पशुपतिको जात्रा सिद्धाको व्यापारको प्रतिक्रिया दिए । वास्तवमै यो अहिलेको परिवेशमा घटिरहेको यथार्थता हो । जहाँ मानिस युट्युवका लागि मानवीय संवेदना गुमाइरहेका छन् । कतै दुर्घटना हुन्छ घाइतेको उद्धार गर्नुको सट्टा युटयुवका लागि राम्रो कन्टेन्ट हुन्छ भनेर भिडियो खिचिरहेको हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा अशोक दर्जीपनि त्यसैको सिकार भएका छन् । यतिसम्म की अशोक दर्जीको छिमेकी रिसाए, अशोक दर्जीको अर्की आमा भेटियो जस्ता कन्टेन्टहरु पनि युटयुवमा छरिएका छन् । यसले हामी पैसाको पछाडि दौडिँदा हामी कता जाँदैछौं भन्ने सोँच्न बाध्य बनाएको छ ।
किन यसो भईरहेको छः
नेपालमा युट्युब च्यानलमा आउने त्यस्ता कन्टेन्टहरुको निगरानी र नियन्त्रणका लागि कुनै निकाय तथा नियम नै छैन । जसका कारण पनि यस्तो विकृति बढनु असामान्य होईन । अर्कोपाटो यो कामलाई रमाईलोका रुपमा लिईनु पनि हो । कलाकारहरुसंग कुरा गर्न पाइनु, नजिक हुन पाइनु, संचालनका लागि खर्च नलाग्नु जस्ता कारण पनि दिन दुईगुणा र रात चौगुनाको रुपमा युट्युवको संख्या बढ्दो छ । संगसंगै युटयुवमा राम्रो भ्यू पायो भने कमाई पनि राम्रो हुँदा यस्तो विकृति बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पछिल्लो समय युटयुवमा बढ्दो विकृतिप्रति पत्रकार-सञ्चारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी चलचित्र पत्रकारितामा युटयुवको विकृति बढ्दो छ । केहीले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । युट्युवरलाई सञ्चारकर्मी, पत्रकार भन्ने कि नभन्ने भन्ने चर्को बहस समेत चल्न थालिसकेको छ । समाजमा सही सूचना दिनु, मनोरञ्जन दिनु, सचेत बनाउनु पत्रकारिताभित्र पर्छ तर यहाँ विकृति समेत भित्रिइरहेको छ । समाचारमा सूचनाको सत्यता, वस्तुपरकता, विश्वसनीयता, कार्यगत स्वतन्त्रता, जनहित, तटस्थता, स्वच्छता, जवाफदेहिता आदि हुनु आवश्यक छ । तर, खाली बिकाउ कन्टेन्ट राख्ने र भ्युजको पछाडि दौडिने युटयुब च्यानल ‘मिडिया’ र त्यसमा काम गर्नेहरू ‘पत्रकार’ हुन् कि होइनन् नियमन हुनु जरुरी छ ।डिसी नेपालबाट
Previous post: कागको अचम्मको बानी ! मृत शरीरप्रति झन् बढि यौन आकर्षण
Next post: श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ? यस्ता छन् केही रहस्यमय जानकारी